SAWIRO : Booliska Kenya oo Nairobi ku toogtay Dhalinyaro Soomali ah. - Wargeyska Faafiye
., .Warka, Editorial
Warka imanaya magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya ayaa sheegaya in ciidanka ammaanka dalka Kenya ay ku toogteen xaafada Islii laba dhalinyaro Soomaaliyeed oo lagu eedeeyay in ay burcad ahaayeen.
Ciidanka ammaanka ayaa soo bandhigay hub lagu soo qabtay dhalinyarada ay toogteen oo la sheegay in ay dhibaato weyn ku hayeen dadka kunool xaafada Islii.
Dhalinyaradan ayaa la sheegay in ay ka tirsanaayeen kooxo isku jirta Kenyaan iyo Soomaali oo la magacbaxday Super power ,kuwaa soo la sheegay in ay dhac u geysan jireen dadka kunool xaafada Islii.
Sarkaal ka tirsan ciidanka dalka Kenya ayaa sheegay in ay ku dabajoogeen dhowr bilood sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa raggaasi ka dibna ay toogteen.
Madaxda Soomaaliyeed ee kunool Xaafada Islii ayaa horay ugu baaqay dhalinyarada Soomaaliyeed in ay ka tanaasulaan falalka xun xun ,waxayna dowladda Kenya ugu baaqeen in ay dhaqan celin u sameyso dhalinyaradaasi.
Filed in: ., .Warka, Editorial
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsDHAGEYSO qaabka ay Alshabaab iyo darawalka khaas ah ee General C/kariin Yuusuf (Dhegabadan)ku heshiiyeen in ay u dilaan Generalka.Geedi oo M/ weynenimo doonaya.Dhageyso: Hogaanka Al-Shabaab Godane Oo Baaq Ujeediyay Shacabka Soomaalida.Qaraxyo ka dhacay MuqdishoDad wax ku noqday roobab Garowe ka da'ay